हाम्रो जीवन किन यति तनावग्रस्त ? - Yohosamachar
September 1, 2020 September 1, 2020 योहो समाचार	0 Comments
तनाव एक मानसिक स्थिति हो । तर, यसको सोझो सम्बन्ध शरीरसँग हुन्छ । हामीमा जति-जति तनावको स्तर बढ्दै जान्छ, स्वास्थ्य स्थिति उत्तिकै नाजुक बन्छ ।
मनोचिकित्सकहरु भन्छन्, तनाव शरीरका लागि त्यती नै हानिकारक छ जति खराब खानपान र जीवनशैली । मदिरा पिउनु, चुरोट सेवन गर्नु आफैमा हानिकारक छ । यस्तै हानिकारक छ, तनाव पनि ।
हामी अक्सर तनावरहित जीवन विताउने यत्नमा हुन्छौं । तर, कुनै न कुनै कारणले हामीलाई तनावग्रस्त बनाइदिन्छ । हामी सुनिरहेका हुन्छौं, भनिरहेका हुन्छौं, ‘तनाव लिनुहुन्न ।’ यद्यपि हामी तनावको भुँमरीबाट बाहिर निस्कनै सक्दैनौं । केही न केही कुराले हामीलाई तनावको स्थितिमा पु¥याउँछ ।
तनावलाई पूर्णत निषेध गर्न संभव छैन । व्यवहारिक जीवन जिउने क्रममा हाम्रो वातावरण नै यसरी निर्माण भएको हुन्छ, जसले तनावलाई एउटा हिस्सा बनाउँछ । त्यसैले हामीले आफ्नो जीवनलाई तनावबाट एकदमै अलग राख्न सक्दैनौं । त्यसो भए के तनावमुक्त जीवन संभव छैन ?
तनावलाई निषेध गर्ने होइन, व्यवस्थापन गर्ने हो ।
संसारका हरेक व्यक्ति तनावको घेराबाट बाहिर छैनन् । सबैलाई कुनै न कुनै कारणले तनाव भएकै छ । तर, कसैले तनावले अत्याधिक पिरोलेको छ भने कतिपयले तनावलाई एक सामान्य रुपमा स्विकारेका छन् । यसको अर्थ कसैले तनाव लिन्छन् भने कसैले त्यसको सही व्यवस्थापन गर्छन् । त्यसैले तनाव व्यवस्थापन एक महत्वपूर्ण आवश्यक्ता हो ।
हाम्रो जीवनमा तनाव आफुमात्र आउँदैन । त्यसले अरु विकारहरु पनि साथमा लिएर आउँछ । जसै हामी तनावग्रस्त बन्न पुग्र्छौं, त्यसले हाम्रो उर्जा, सीप, दक्षता, कार्यकुशलता, धैर्यता, सहनसिलता सबैलाई नराम्ररी प्रभावित बनाइदिन्छ । साथसाथै यसले शरीरका भित्री अंगहरुको कार्य संचालनमा अवरोध पु¥याउँछ । हृदयरोगदेखि रक्तचापसम्मको स्थितिमा पु¥याउँछ ।
त्यती मात्र होइन, हामी उभिएको माहौल नै खराब बनाइदिन्छ । परिवार, साथीभाई सबैलाई त्यसले कुनै न कुनै रुपमा असर गर्छ । त्यसैले त सदियौंदेखि तनावमुक्त जीवनको खोजी हुँदै आएको छ ।
एउटा अनुसन्धानले के देखाएको छ भने पुरुषको तुलनामा महिलाहरु बढि चिन्ता लिन्छन् र तनावमा आउँछन् । त्यसैले पुरुषहरुको तुलनामा महिलाहरुको स्वास्थमा तनाव र चिन्ताले नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । अनुसन्धानले नै के देखाएको छ भने हृदयघातबाट मृत्यु हुने पुरुषहरु ३८ प्रतिशत छन् भने महिलाहरुको संख्या ४७ प्रतिशत छ ।
कमजोरी हुनु, टाउको दुख्नु,पेटसम्बन्धी समस्या देखापर्नु, वाकवाकी लागे जस्तो हुनु, मांशपेशीमा तनाव हुनु, मांशपेशी दुख्नु, छातीमा पीडा हुनु, मुटुका धड्कन बढ्नु, राम्ररी निद्रा नलाग्नु, चिडचिडाहट हुनु, एक्लोपन महसुस हुनु, शारीरिक रुपमा थकान अनुभव गर्नु आदि तनाव भएपछि हुने शारीरिक लक्षणहरु हुन् ।
तनावको स्थितिमा भोक लाग्दैन, कुनै पनि काम गर्न मन लाग्दैन, सम्झने शक्ति नै कमजोर हुन्छ, तौल बढ्ने अथवा घट्ने सम्भावना देखिन्छ, यौन इच्छामा समेत कमी आउँछ ।
तनावलाई कसरी हटाउने ? तनावमुक्त जीवन कसरी पाउने ? तनाव व्यवस्थापनको विधी के हुन् ? यावत् विषयमा खोज र अभ्यासहरु भएका छन् । कतिपय शारीरिक क्रियाबाट समेत तनावमुक्त हुने विधीहरु पहिल्याइएका छन् । प्राणायाम त्यस्तै विधीमध्ये एक हो ।
जब तपाईं कुनै कुराले दुःखी, चिन्तित वा तनावग्रस्त बन्नुहुन्छ, गहिरो वा लामो सास लिएर फरक अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ । यस्ता व्यवस्थित विधी अपनाएर पनि तनाव व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।
कुनैपनि कुराको उपचार गर्नुअघि त्यसको कारणहरु खोजिन्छ । त्यसैगरी तनाव व्यवस्थापनका लागि पनि पहिले त त्यसको जरा पहिल्याउनुपर्ने हुन्छ । जस्तो के कारणले तनाव भइरहेको छ ।
हामीलाई तनाव हुने कारणहरु प्रसस्त छन् । सोच जस्तो काम नहुनु, कामको चाप बढ्नु, आर्थिक रुपले समस्या पर्नु, प्रतिस्पर्धात्मक जीवनशैली अपनाउन थाल्नु, घरपरिवार तथा अफिसको कामको दोहोरो जिम्मेवारी वहन गर्नु, करियर र पारिवारिक सम्बन्धलाई सन्तुलन राख्न नसक्नु जस्ता कारणले हामीमाझ तनाव उत्पन्न हुन्छ । यावत् कारणहरु पहिल्याएर तनाव के कारणले भएको छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन वा समाधान गर्ने भन्ने कुरा खोज्नुपर्छ ।
← नेपालमा आज थपिए १ हजार ६९ कोरोना संक्रमित, संक्रमितको संख्या ४० हजार ५२९ पुग्यो
सन्दर्भ कोभिड १९ →
April 4, 2020 April 5, 2020 योहो समाचार	0
June 2, 2020 June 3, 2020 योहो समाचार	0